Bayer Munich Oo Rabto In Koulibaly Iyo Upamecano Iska Garab Ciyaar Siiso.
HomeHoryaalka GermalkaBayer munich oo Rabto in Koulibaly iyo Upamecano iska garab ciyaar siiso.
March 3, 2021 Horyaalka Germalka, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Bayern Munich ayaa ku fikireysa in xilli ciyaareedka soo socda ay iska garab ciyaar siiso labada daafac ee aadka u adag Koulibaly iyo Dayot Upamecano, kaasoo saxiixiisa horey loogu dhawaaqay xagaaga.
Bayern Munich ayaa la xiriirtay Napoli horaantii isbuucaan oo ku saabsan iibsashada daafaca 29 jirka Kalidou Koulibaly, sida laga soo xigtay Tuttosport.
Kooxda ayaa weyneysa daafaca dhexe David ee Alaba xagaagan waxaana muuqata inay xiiseyneyso inay ku darto halyeey la isku halleyn karo oo ku soo laaban doona safka dambe ee 2021-22. Dayot Upamecano, oo 22 jir ah, ayaa durbaba ku soo biiraya xagaagan hadii ay helaan koulibaly bayer markaas waa ay adkaan doontaa sidii looga dhaliyo goolal.